Dear Daw Su,
So, what about new flag?
We want to recommend the old one only.
That one is internationally recorded?
Sep 05, 2011 09:24 PM
အင်္ဂလိပ်တွေ Burma လို့ခေါ်တုံးကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတောင်းခဲ့လို့လား။စစ်အစိုးရနဲ့မတူရင်ပြီးရော စကားတတ်တိုင်းလျှောက်ပြောနေတယ်။
Jun 01, 2011 01:42 AM
ဒေါ်စုကြည်ဟာ နေရာတကာမှာ နိုင်ငံရဲ့ဆန္ဒကိုပဲပြောနေတယ်၊ သမိုင်းမှာထင်ရှားနေတဲ့ နာမည်ဟာ တပ်မတော်အစိုးရက ထွင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲ။ ဒီလိုခေါ်ဖို့ဆန္ဒ ခံယူစရာ မလိုပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေ အမည်ပြောင်းတဲ အခါမှာလဲ ဆန္ဒ မခံယူကြပါဘူး။
May 28, 2011 01:54 PM
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဒေါ်စုက နဲနဲအစွန်းရောက်နေလားလို့ဗျာ..သူသာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတိုးတက်စေလိုရင် ညှိသင့်တာညှိ လျော့သင့်တာလျော့၇မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ..ခုတော့နံမည်ကောင်းလက်မှတ်တွေပဲစုနေသလိုဖြစ်နေပြီးတော့ ကျွန်တောတို့ပြည်သူတွေဘဝကျတော့ ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ...
May 27, 2011 04:39 PM
ဒါပေါ့...ခင်ဗျားက Burma ကိုပဲကြိုက်မှာပေါ့..ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ခင်ဗျားက ဗမာကိုး.... မြန်မာဆိုတဲ့နာမည်က တနိုင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နာမည်...ခင်ဗျားတို့ ဗမာတစ်ခုတည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ဘူး.. နာလည်ထား...ကျူပ်က စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံသူမဟုတ်ဘူး..ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားပါတီ ကိုလည်း ရွံတယ်....
May 27, 2011 01:08 PM